Isku laabida taleefannada casriga ah ee aan ku arki doonno MWC 2019 | Androidsis
Waa maxay taleefannada casriga ah ee isku laaban ay imaan doonaan MWC 2019?
MWC 2019 wuxuu bilaaban doonaa berrito bandhigyo taxane ah. Noocyo dhowr ah ayaa horeyba u abaabulay munaasabad bandhig ah, oo lagu baranayo taleefannadooda casriga ah. Isbuucaan, halyeeyada ugu weyn wuxuu ahaa Samsung Galaxy Fold, Taleefanka Samsung ee isku laaban. Calaamadda Kuuriya waxay rabtay inay saadaaliso dhacdada taleefanka ee Barcelona marka la eego arrintan. In kasta oo dhacdadan aan ka filan karno moodooyinka isku laabma.
Dhowr toddobaad ka hor ayaa la xaqiijiyay in aan filan karno taxane ah moodooyinka isku laaban sanadkaan Android. In kasta oo aan awoodi doonno inaan la kulanno qaar ka mid ah toddobaadkan inta lagu guda jiro dabaaldegga MWC 2019. Markaa waxaan arki doonnaa sida summad kasta ay u tarjumeyso qaybtan suuqa.
3 XANTA: Xiaomi
Dhowr toddobaad ka hor Huawei wuxuu xaqiijiyay joogitaankiisa MWC 2019, leh boodhadhka aad ku arki karto sawirkan kore. Dhexdeeda, waxaa loola jeedaa inaan ka filan karno taleefannada casriga ah ee isku laaban doona magaca Shiinaha. Horay ayaan kuugu sheegnay maalmo kahor Calaamadda Shiinaha ayaa la filayaa inay soo gasho qaybta taleefannada casriga ah ee dhacdadan ka dhacaya Barcelona. Marka waxay noqon doontaa ilbiriqsiyadan sidan oo kale ah.
Sidoo kale, ha iloobin taas Qalabka Huawei wuxuu sidoo kale noqon doonaa taleefanka ugu horreeya ee 5G inay soo bandhigayaan. Shaki la'aan, waa guul u soo hoyatay astaanta. Marka lagu daro naga tagida moodada isku laaban, waa mid leh 5G, oo la filayo inuu helo joogitaanka suuqa sanadkan.
Berri Axad 14:00 pm Waan awoodi doonnaa inaan ogaanno waxa sumadda Shiinaha ay ku diyaarisay qalabkan cusub. Dhacdo aynaan seegi doonin, markaa waxaan kuu sheegi doonnaa wax kasta oo ay ku soo bandhigaan dhacdadan. Maxay cadahay in ay ka dhigayaan soo galintooda qaybta taleefannada casriga ee qaabkan leh.
Nubia waxay ahayd nooc kale oo ka mid ah noocyadaas xaqiijiyay joogitaankooda MWC 2019. Intaa waxaa u dheer mid kale oo leh soo galitaankeeda qeybta taleefanka isku laaban la xaqiijiyay. Tan iyo markii shirkaddu ku dhawaaqday dhacdo soo bandhigid ah, oo ku timid magaca Flex Your Life. Marka way iska cadahay inaan filan karno aalad qalabkeeda qalooca. In kasta oo ku saabsan aaladda lafteeda xog yar ayaa jirta illaa iyo hadda.
Maaddaama summaddu ay leedahay patent-ka aaladda aaladda casriga ah ee qaab smartwatch ah, si markaa loo labalaabi karo saacad ahaan. Laakiin ma jiraan wax xog ah oo ku saabsan inay tani tahay sheyga ay ku soo bandhigayaan Barcelona iyo in kale. Sidaa darteed, waa inaan sugnaa. Xaaladdaada, ma jiro taariikh cayiman. Waxaan kaliya ognahay in Nubia ay noqon doonto MWC 2019, laakiin ma hayaan dhacdo la qorsheeyay sida Huawei ama Sony, oo ay ku soo bandhigayaan qalabkan isku laaban.
Xiaomi waa mid ka mid ah noocyada badan ee ka shaqeeya isku laabidda taleefannada casriga ah. Nooca Shiinaha ayaa mar hore na sii daayay inaan ku aragno qaabka shatiga, roon o video qalabkan la filayo in lagu soo bandhigo dukaamada sanadkan. In kasta oo aysan jirin wax la xaqiijiyay oo ku saabsan soo bandhigiddeeda. Saacadihii ugu dambeeyay waxaa jiray warbaahin tilmaamaysa inay ku soo bandhigi doonaan munaasabaddan oo ay la socdaan bandhigga caalamiga ah ee Xiaomi Mi 9, taasi waxaa horey loogu soo bandhigay todobaadkan si rasmi ah.
Waayo, waqtigan la joogo waa war aan la xaqiijin. In kasta oo aan shaki ku jirin, waxay u oggolaaneysaa inay kordhiso tirada moodooyinka isku laabma ee MWC 2019, marka lagu daro abuurista xiisaha weyn. Sababtoo ah waxay ballanqaadeysaa inay noqon doonto qalab gebi ahaanba ka duwan waxa noocyada kale ay ku leeyihiin horumarka. Laakiin ma ogin inay runti la sii jiri doonaan taleefankan berri. Waxaan rajeyneynaa inaan helno xoogaa xaqiijin ah saacadaha soo socda. Haddii kale, berri waxaan awoodi doonnaa inaan ku xallino shakiga ku jira soo bandhigiddaada.
Midkee ka mid ah taleefanada isku-laabma waxaad aad u rajeyneysaa inaad ku aragto MWC 2019?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Waa maxay taleefannada casriga ah ee isku laaban ay imaan doonaan MWC 2019?
Sida loo ogaado barnaamijyadooda u adeegsada RAM-ka ugu badan Android
Realme 3 waxaa si rasmi ah loo bilaabi doonaa 4-ta Maarso